देश ठूलो कि कुर्सी भनेर कसैले सोधे भने हामी ‘कुर्सी’ भन्छौं। देशभन्दा कुर्सी किन ठूलो भनी पुनः प्रश्न गर्दा जवाफ आउँछ– कुर्सी भनेको माहुते हो, जसले विशाल हात्ती (देश)लाई हाँक्दछ।
आज प्रश्न यस्तो किन ? किनभने हाम्रो नेपालमा अहिले कुर्सी महापुराणको अखण्ड पाठ, कुर्सी कीर्तन, कुर्सी जप, कुर्सी चिन्तन–मनन आदि राष्ट्रियस्तरमा अहोरात्र चलिरहेको छ।
कुर्सीका बारेमा चौबीसै घण्टा बोल्न सक्ने पण्डितहरू केपीशर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, वकीलहरू, भूतपूर्व न्यायाधीशहरू, सबै पार्टीका नेताहरू, झोलेहरू आदि इत्यादि तथाकथित नेताहरू र तिनका आफन्तजन कहलिने सबै भाग्यमानी पर्दछन्।
सबैको अर्जुनदृष्टि एकमात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकेको हुन्छ। अहिले प्रमको कुर्सीमा विराजमान ओलीलाई सो कुर्सीबाट तल झारी जसरी हुन्छ आफू वा आफ्नो मान्छेलाई बसाउन पाए देशलाई लुटेर खान सकिन्छ भन्ने दाउ सबैको छ।
यस्ताखाले लुटेराहरूलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा नेता, देशभक्त, जनसेवक, राष्ट्रनायक, जननेता आदि इत्यादि भव्य शब्दले सम्बोधन गरिन्छ। सोही अनुसार मानसम्मान, इज्जत–प्रतिष्ठा पनि पाउँछन्, यी देशमा राज गर्ने भाग्यमानीहरूले।
हामी सामान्यतया कुर्सीलाई निर्जीव भन्छौं। तर यो हाम्रो ठूलो भूल हो। ठूलठूला सजीवहरूले निर्जीव कुर्सीको पूजापाठ, भजन कीर्तन, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम गरेको देख्दा कुर्सीलाई निर्जीव भन्न मिल्छ के ?
महर्षि वेदव्यासको पालामा कुर्सी त थिएन तर कुर्सीको हजुरबुबा त थियो नि। हजुरबुबालाई चै राजसिंहासन भन्थे। त्यै राजसिंहासन अहिले कुर्सीको रूप धारण गरेर प्रकट भएको छ। हुन पनि सक्छ। यो मोरो अचम्म उल्काको संसारमा हुन नसक्ने के नै छ र ?
कुर्सी प्राप्त गर्ने महान् अभियानमा लागिपरेका हाम्रा महान् नेताहरूलाई देश र देशवासीहरूका बारेमा सोच्ने फुर्सत नै कहाँ हुन्छ र १ फुर्सतै नभएपछि कसको के लाग्छ त ?
त्यसो त कुर्सीका लागि हानाथाप, तँछाड–मछाड, झैंझगडा, लडाइँ, युद्ध, सत्य, त्रेता र द्वापर युगमा पनि भएकै हो नि। राज्यकै लागि महाभारतको युद्ध भॉथियो। देवता र दानवहरूका बीचमा धेरैपटक युद्ध भएकै हो। स्वर्गको राज्य छोडेर देउताहरू कैयौंपटक भागेर, लुकेर बस्नुपरेको थियो। कुर्सीकै करामात त हो नि ?
मान्छेको भोकपन अनेक थरीका हुन्छन्। मान्छेलाई पावर (शक्ति) पनि चाहिन्छ। कुर्सीमा बसेपछि पावर बढ्छ। पावर, पैसा, पद यसैमा आजको मान्छे अलमलिएको छ। धेरै अलमल भएपछि काम चैं हुँदैन।
कुर्सीको महिमा जति गाए पनि नसकिने हुनाले अब यो गन्थन यतिमैं तुरौं कि ? जेहोस्, कुर्सीको लडाइँ कहिल्यै टुङ्गिएला जस्तो छैन। भगवान्ले सबैलाई सद्बुद्धि दिऊन्।
यौटाले भन्थ्यो, कुर्सी सुकेको हाड हो र हाम्रा कुर्सीप्रेमीहरू त्यो हाड चुसेर रमाउने चारखुट्टे पुच्छरवाला जन्तु हुन्।
on 9:23:00 PM0Comment
यस प्रकार राजा ययातिले धैर्यको साथ कामनाहरूको त्याग गरेर आफ्नो पुत्रलाई राज्यसिंहासनमाथि बसालेर आफू वनमा गइहाले। उनी पनि तिमी र तिम्रा छोराभन्दा श्रेष्ठ थिए। उनीहरू मरेपछि पनि तिमीले आफ्नो पुत्रको शोक गर्नु असल होइन, गर्नुहँुदैन। क्रमशः...
अब आगो जसरी पनि निभ्दैन। एकै छिनमा खरानी भइहाल्ला सबै। यस्तो भएपछि किरिया बोक्नेलाई अगाडि सार्दै खोलामैं अलिक माथि नुहाउनलाई अगाडि बढ्छन् सबै। हातको लकडीको टुक्रो पछाडितिर फाल्दै सबैले बोल्छन्– “राम नाम सत हए, सबके इहे गत हए...।”
सृञ्जय, जसले प्रजामाथि पुत्रको समान प्रेमभाव राख्दथे, ती दशरथनन्दन राम पनि परमधाम गइसके। उनी अत्यन्त तेजस्वी थिए। आफ्नो पिताको आज्ञाबाट उनी धर्मपत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणका साथ चौध वर्षसम्म वनवास गरेका थिए। जनस्थानमा रहेर तपस्वी, मुनिहरूको रक्षार्थ उनले चौध हजार राक्षसहरूको वध गरेका थिए। त्यहाँ बस्दा लक्ष्मणसहित रामलाई मोहमा पारेर रावण नामक राक्षसले उनकी पत्नीलाई हरण गरेर लग्यो। यद्यपि रावण र दैत्यहरूसित पनि अवध्य थियो, साथै ब्राह्मण र देउताहरूको लागि कण्टकरूपी थियो। रामले उसलाई उसका आफन्तहरूसहित मारेर सीतालाई फर्काए। देउताहरूले उनको स्तुति गरे, सम्पूर्ण संसारमा उनको कीर्ति फिजियो। देउता र ऋषिहरू उनको सेवामा रहन थाले। उनले विशाल साम्राज्य पाएर सम्पूर्ण प्राणीमाथि दया गरे। धर्मपूर्वक प्रजाको पालन गर्दै अश्वमेध नामक महायज्ञको अनुष्ठान गरे। क्रमशः...।